Mary's Experience | Amatikiti eNtaba yeTafile
Amatikiti eTafile eNtaba
Umbhali weposi Ngu Amatikiti eNtaba yeTafile
Umhla weposi EyoKwindla 29, 2020
Andinamazwi ivuliwe Amava kaMary
Umama ongatshatanga oneminyaka emihlanu ubudala, UMary wayeceba ukuza eKapa ukuza kubona iNtaba yeTafile. Uhambo luya kuba lude 16 iiyure ukusuka eIreland. Lonto ibimenza abe novalo ngakumbi ngoba umntana wakhe ebemnye qha 5 iminyaka ubudala ixesha. Waqala ukukhangela kwi-intanethi izinto azenzayo eKapa kwaye wadibana neTable Mountain National Park, kuphela 20 Ukuhamba imizuzu ukusuka eCape Town City Centre. Ukufumanisa oko kwamenza wonwaba, wayezibuza ukuba uza kunyuka njani 330 yezigidi zeminyaka ubudala ngexesha lasekuseni nosana lwakhe. 5-abaneminyaka ubudala bathathe ixesha lokuzilungiselela- okanye wayecinga njalo. Ukulinda kwizicwangciso zakhe zokwenza umbono ophathekayo, uthathe inyathelo lokuthenga amatikiti eTafile eNtabeni kwi-intanethi njengesixa esigqithileyo.
Ukhetho lwakhe lokuqala lweetafile zeNtaba yeTafile yayiyiziko lewebhu lafunyanwa apha kwiTafileMountainTickets.com kuba lwaluninzi ulwazi malunga neCable Car ekhoyo, kubandakanya ne-Aerial Cableway, iiyure, amaxesha, iindleko, kunye nendlela yokufika apho 2020. Amatikiti abandakanya isikhokelo kunye nolunye ulwazi ebengazukukwazi ngaphambili ukuba akaphandanga “Amatikiti eNtaba yeTafile” kuGoogle.com. Ulumkile njengoko wayenjalo, wayengazi ukuba angalithenga njani itikiti kushiyeke nje iintsuku ezimbalwa; Kulapho indawo yanikezela khona yonke idatha efunekayo ukwenza ukhetho lokuba uza kuthenga ngoku okanye uza kuthenga kamva. Imozulu yaseKapa itshintsha ngokukhawuleza, yiyo loo nto ekhetha ukuthenga ngoko, unikwe ingxelo yokuba kunikelwe ingxelo kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, wayefuna ukuyilinda. Intsasa yayibalele ngalo mini, kodwa nangona uqikelelo belusithi imvula, wayevile ukuba iKapa linjaniamaxesha amane ngosuku olunye. Inomdla njengoko inokuba njalo, UMary wayefuna ukuthenga amatikiti ngexesha elinemozulu enelanga eKapa.
Ukulandela ukuqaphela kwakhe kwimozulu yaseKapa, wathenga amatikiti 3 kwiintsuku zokufika kwakhe eKapa. Nangona imozulu ibinetha kusasa, Imvula eyi-1mm ayimhlulanga, kwaye wabona njengosuku olungaphambi kokuba iKapa lifumane utshintsho kwimozulu ngokukhawuleza. Itafile yeTafile ibamba imozulu yayo, Kwaye ngenxa yokuba wayehlala ngasentabeni ejonge eWaterfront, Iidemon Peak, kunye neKapa eseMbindini, wakhetha ukuyidlala ngendlebe kwaye wabona imozulu ngosuku. Kwiintsuku ezintathu kamva kwaye wayezenzele intsasa elungileyo yokundwendwela iCable Car eKapa, ngemozulu entle njengoko inokuba njalo, ukhetha ukusebenzisa amatikiti eTafile yeNtaba kusasa. Iipasile zazisemthethweni ukusuka 8:30 Ndiza 1:00 emva kwemini, Ngeli xesha ke kuya kufuneka ukuba athenge itikiti elitsha leNtaba yeTafile kwimoto yasemva kwexesha yeCable. Amatikiti asekuseni ebengasebenzi emva koko 1:00 pm nangayiphi na indlela - wayecinga ukuba kungcono ukuyisebenzisa ekuseni ngelixa isentsha, kwaye umgca oya kwi-Aerial Cableway mfutshane.
Usana lwakhe lwalukulungele 7:00 ndim, kwaye kuthathe kuphela imizuzu embalwa ngu-Uber ukufikelela kwi-Lower Aerial Cableway, wakhangela kuGoogle.co.za kubusuku obungaphambili. Kwakhona, Kwi-Intanethi yayifumaneka ingcaciso ngamaxesha okuvula kweCable Car, ebengazukuyazi ngenye indlela ukuba ebengakhange akhangele "amatikiti eTafile yeNtaba." Umsebenzi wenziwe, kwaye yena kunye neminyaka emihlanu ubudala bakhwela kwimoto yekhebula kunye namatikiti e-elektroniki ababewafumene kubusuku obungaphambili. Ithathe kuphela 24 iiyure zokuba afumane amatikiti nge-imeyile, kodwa akazange akhangele kuba wayexakeke kakhulu zizinto ezinje ngeBoulders Beach kunye noonombombiya baseSimons Town. Ngosuku olungaphambili ebethengela eWaterfront kwaye ekhangela into anokuyithengela umntwana wakhe oneminyaka emihlanu ubudala, kubandakanya izinto zokudlala ezifakiwe kunye nezinye izinto ezikhumbuza iivenkile ezinje ngemakethi ye-PnP.
I-Aerial Cableway ephezulu yayixakekile, Wazifumana ejongene nabantu abaninzi, Bonke abo babenombono ofanayo wokusebenzisa amatikiti eemoto zeCable ukuya kwiNtaba yeTafile yeAerial Cableway. Apho bathabatha iifoto kwaye benza into efanayo naleyo wayenzayo, kuphela ukuba wayexelelwe ngakumbi ngamaxesha eCable Car kwaye esazi ukuba makahambe kwangoko phambi kokuba isihlwele sabantu itafile yeNtaba yeTafile ibisemthethweni kuhambo lwakhe lokubuya ngoko ke akukho ndlela ebezakuhamba ngayo mva 10:00 ndim. Emva koku, izihlwele zaqokelelwa, kwaye wayenokulibaziseka kuhambo lwakhe lokubuya ezantsi kweNtaba yeTafile. Umntwana wakhe oneminyaka emihlanu wayeziphethe kakuhle kuyo yonke le ndlela. Emva kweNtaba yeTafile, UMary wayefuna ukubiza usapho kunye nabahlobo bakhe eIreland, ke wabeka umnxeba nge sim card awayeyithengile eVodacom phezolo kwa V&Umda wamanzi. Unxibelelwano lwe4g lwalulungile ngokwaneleyo ukuba lubambe umnxeba wevidiyo ye-HD ukusuka kwiCandelo leMoto esezantsi yomoya kusetyenziswa iWifi yabo. I-Wifi yasimahla yayifumaneka kwi-Aerial Cableway esezantsi, eyenza ukuba kube lula kuMary ukuba abambe umnxeba wevidiyo yasimahla kusapho lwakhe eIreland. Uye wema kwindawo yokuma kweebhasi eSixeko kwiNtaba yeTafile ukubonisa usapho lwakhe indlela eya eSignal Hill nakwiNtloko yeeNgonyama, kunye neNtaba yeNtaba yeNtaba yoBuso kunye neMoto yeNtambo. Usapho lothukile yindlela iTable Mountain, enye yeNew 7 Izimanga zeNdalo, Ungabamba iAerial Cableway phantse i1km phezulu esibhakabhakeni. Kuba yayijikeleze 10:00 ndim, UMary wagqiba ekubeni abuyele kwihotele yakhe kunye neminyaka emihlanu ubudala ukuze abe ne-brunch kwicandelo le-buffet. UMary wayezibuza ngaphambi kohambo lwakhe ukuba uza kuhlala phi eKapa, kwaye wafumana indawo emnandi ehleli kumathambeka eTafelburg nge Booking.com. Kwakubiwe ngexabiso kuba uMariya wayecwangcise uhambo lwakhe lwexesha lonyaka, zitshiphu kakhulu kunokuba bezinokwenzeka ngeenyanga zaseKapa zasehlotyeni, Disemba ukuya kuJanuwari. Ukubuka iindwendwe ngeli xesha kunganzima kuba abahlali abakwi-Airbnb bakufumanisa kunzima ukuhlangabezana neemfuno zokuhlala eKapa. Eyona nto ibalaseleyo uMariya ayibhukishe ukuhlala kwakhe kwiinyanga ezingekhoyo!
Iimpawu blog, amava, amaxesha, uphononongo, Amatikiti eNtaba yeTafile
← Amava kaPat → Amava kaJeff
Idilesi ye-imeyile ayizukupapashwa. Iindawo ezifunekayo ziphawulwe *
© 2021 Amatikiti eNtaba yeTafile
Ukuya phezulu ↑ Phezulu ↑